Batman v Superman: Dawn of Justice (2016) | MM Movie Store
ဒီဇာတျကားကို ရုံတငျတုနျးက ကနြေပျမှုမရခဲ့တဲ့ ပရိသတျတှေ ရှိခဲ့သလို လူမှုကှနျယကျတှမှော ဒါရိုကျတာ Zack Snyder ကို အပွဈတငျတဲ့ စာတှေ အမြားအပွားထှကျလာခဲ့ဖူးပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ခု ထှကျလာတာကို ကွညျ့ပွီးနောကျမှာ အငျတာနာစာမကျြနှာ မှာ ဒါရိုကျတာကွီးကို ပွနျလညျတောငျးပနျမှုတှေ အမြားအပွား ပျေါပေါကျလာခဲ့ပါတယျ။ကြှနျတျောအမွငျမှာလဲ တကယျကို အဲဒါ မှနျကနျတယျထငျတာပါပဲ။
ဇာတျလမျးဟာ အမြားကွီးပိုခြိတျဆကျမိပွီး လေးနကျသှားပါပွီ။ကွညျ့ပွီးသားဖွဈစေ မကွညျ့ဘဲစောငျ့နသေညျ ဖွဈစေ ကွညျ့ဖို့ သိပျတနျတဲ့ ကားတဈကား ဖွဈလာတာပါပဲ။
ဇာတျလမျးအကဉျြးမှာတော့ သူသာ စိတျထဲမှာ လုပျခငျြရငျ ကမ်ဘာဂွိုလျတဈခုလုံးကို ရှငျးပဈနိုငျတဲ့ ဂွိုလျသားကို အန်တရာယျကောငျလို့ မွငျနတေဲ့ လငျးနို့လူသား….ဥပဒရေဲ့အထကျမှာ တရားစီးရငျနတေဲ့လငျးနိ့ ကို မရှိသငျ့ဘူးထငျတဲ့ သံမဏိလူသားတို့ ရဲ့ ရပျတညျခကျြထိပျတိုကျ တငျးမာနခြေိနျမှာ….
စူပါမနျးသှားလရောမှာ သံသယဖွဈစရာ လူသမှေုတှေ ဆကျတိုကျပျေါနလေို့ သဲလှနျစလိုကျရှာနတေဲ့ သတငျးထောကျမလေး လူးဝဈလိနျး။စှမျးအားအကွီးဆုံးလူမှနျရငျ လူကောငျးမဖွဈနိုငျဘူး-
လူကောငျးစဈစဈဆိုရငျစှမျးအားမပွညျ့စုံတော့ဘူး ဆိုတော့ အတှေးနဲ့ ငယျစဉျကတညျးက ဖနျဆငျးရှငျအပျေါ နာကညျြးတဲ့ စိတျဒဏျရာကို God နဲ့ ဆငျတူလာတဲ့ စူပါမနျး အပျေါမှာ ပုံခြ လိုကျတဲ့ လကျဈ လူသာတို့ရဲ့ စိတျဝငျစားစရာဇာတျလမျးနဲ့…..set up လှလှလေးကို ခံစားရမှာပါ။
ဒီဇာတ်ကားကို ရုံတင်တုန်းက ကျေနပ်မှုမရခဲ့တဲ့ ပရိသတ်တွေ ရှိခဲ့သလို လူမှုကွန်ယက်တွေမှာ ဒါရိုက်တာ Zack Snyder ကို အပြစ်တင်တဲ့ စာတွေ အများအပြားထွက်လာခဲ့ဖူးပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ခု ထွက်လာတာကို ကြည့်ပြီးနောက်မှာ အင်တာနာစာမျက်နှာ မှာ ဒါရိုက်တာကြီးကို ပြန်လည်တောင်းပန်မှုတွေ အများအပြား ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အမြင်မှာလဲ တကယ်ကို အဲဒါ မှန်ကန်တယ်ထင်တာပါပဲ။
ဇာတ်လမ်းဟာ အများကြီးပိုချိတ်ဆက်မိပြီး လေးနက်သွားပါပြီ။ကြည့်ပြီးသားဖြစ်စေ မကြည့်ဘဲစောင့်နေသည် ဖြစ်စေ ကြည့်ဖို့ သိပ်တန်တဲ့ ကားတစ်ကား ဖြစ်လာတာပါပဲ။
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းမှာတော့ သူသာ စိတ်ထဲမှာ လုပ်ချင်ရင် ကမ္ဘာဂြိုလ်တစ်ခုလုံးကို ရှင်းပစ်နိုင်တဲ့ ဂြိုလ်သားကို အန္တရာယ်ကောင်လို့ မြင်နေတဲ့ လင်းနို့လူသား….ဥပဒေရဲ့အထက်မှာ တရားစီးရင်နေတဲ့လင်းနိ့ ကို မရှိသင့်ဘူးထင်တဲ့ သံမဏိလူသားတို့ ရဲ့ ရပ်တည်ချက်ထိပ်တိုက် တင်းမာနေချိန်မှာ….
စူပါမန်းသွားလေရာမှာ သံသယဖြစ်စရာ လူသေမှုတွေ ဆက်တိုက်ပေါ်နေလို့ သဲလွန်စလိုက်ရှာနေတဲ့ သတင်းထောက်မလေး လူးဝစ်လိန်း။စွမ်းအားအကြီးဆုံးလူမှန်ရင် လူကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူး-
လူကောင်းစစ်စစ်ဆိုရင်စွမ်းအားမပြည့်စုံတော့ဘူး ဆိုတော့ အတွေးနဲ့ ငယ်စဉ်ကတည်းက ဖန်ဆင်းရှင်အပေါ် နာကျည်းတဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာကို God နဲ့ ဆင်တူလာတဲ့ စူပါမန်း အပေါ်မှာ ပုံချ လိုက်တဲ့ လက်စ် လူသာတို့ရဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာဇာတ်လမ်းနဲ့…..set up လှလှလေးကို ခံစားရမှာပါ။
Stranger (Season 1) ၊ အပိုငျး (၁၅)